Sida loo beddelo waraaqda ranjiga ee iPhone iyo iPad ee iOS 9 | Wararka IPhone
Sida loo beddelo gidaarka iPhone-ka, iPad-ka ama iPod Touch oo leh iOS 9
Juan Colilla | | macruufka 9, iPhone, Casharrada iyo buugaagta
Nidaamka dejinta ama beddelashada warqadda gidaarka ee macruufka qaabkiisu wuu isbedelayay Sanadihii oo dhan, tan iyo markii Apple ay soo bandhigtay suurtagalnimadan iyada oo lagu soo celinayo noocyadeedii ugu horreeyay ee iPhone OS, habka loo adeegsaday ujeeddadan ayaa kala duwan iyada oo aan la helin meel ku habboon oo dhan.
Sababtaas awgeed maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa cashar ku saabsan sida loo beddelo waraaqda gidaarka ee iOS 9, nooca nidaamka qalliinka ee aaladaha iPhone, iPod Touch iyo iPad oo la sii deynayo. Munaasabaddan waxaan dhihi lahaa inay is bedeshay mar kale tan iyo iOS 8 (haddii aan si sax ah u xasuusto), waxa aan hubo ayaa ah inay is beddeshay oo la xiriira macruufka 7.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah u tag arjiga «Settings» qalabkeena macruufka ah, codsigan waa xarunta neerfaha ee nidaamka, dabcanna waa meesha ugu fiican ee lagu dhejiyo qaybtan.
Mar gudaha gudaha anaga waa inaan raacnaa talaabooyinka soo socda:
Hoos u dhig liiska illaa aad ka heleyso qaybta la yiraahdo "Waraaq" in sawirka ku wareegsan yahay guduud oo guji dusha.
Markaad gudaha gasho, waxay kuxirantahay ujeedada aan raadineyno, waxaan haysanaa labo talaabo oo aan doorano; Haddii aan dooneyno inaan wax ka bedelno darbigeenna hadda jira (dib u habeyn ama u beddel bedelka u dhexeeya parallax iyo static mode) waxaan si fudud ku qasbanaan doonnaa inaan taabanno qeybta aan dooneyno inaan wax ka beddelno, ha ahaato shaashadda qufulka ama shaashadda guriga (halka ay astaamuhu ku yaalliin).
Haddii ay ujeeddadeennu tahay inaan dhisno gidaar cusub, waa inaan doorannaa ikhtiyaarka ka muuqda kor sawirrada sawirka labaad, oo loo yaqaan «Xulo sanduuq kale».
Marka gudaha qaybtaan, Apple waxay na siisaa seddex ikhtiyaar oo habayn ah:
1. Asalka Dynamic (oo leh animations).
2. Wali sawiro (asalka asalka ah ee iOS).
3. Sawirada maktabadayada (taasi waxay ku jirtaa guntayada).
Waxaan dooranaa midka aan aad u jecel nahay iyo waxaan u gudbeynaa wejiga xiga.
Sidaan horeyba u ognahay midka uu yahay wallpaper-ka aan dooneyno inaan adeegsanno, ha ahaado mid firfircoon, mid go'an ama ka soo jeeda ciribkeena, kaliya waa inaan u qaabeynaa sida aan u jecel nahay oo aan u siino meel aan u socono, tan darteed waxaan raaci doonaa talaabooyinkan:
Markii aan ogaanno taariikhda aan dooneyno, ayaan ku taabaneynaa.
Shaashad la mid ah tan labaad ee sawirka ayaa ka soo muuqan doonta xariiqyadan, halkan waa inaan u dhaqaaqnaa oo aan ku cabirnaa asalka farahayaga (sida aan ula dhaqmayno sawir kasta oo ku yaal cirifka), ka dibna xulo haddii aan rabno in loo dejiyo qaab "Ma guurto ah" ama leh "Aragtida".
Farqiga u dhexeeya qaababkani waa mid aad u fudud, qaab muuqaal ahaan muuqaalkeennu wuu sii ahaanayaa mid aan dhaqdhaqaaq lahayn, sida aan u qaabeynay; Si kastaba ha noqotee, qaabka aragtida, sawirkeennu wuu dhaqaaqi doonaa iyadoo ku xiran jihada qalabkayaga, oo bixinaysa dareen saddex-geesood ah, wax qurux badan laakiin leh qasaarooyinkiisa.
Marka la eego qaabka sawirada waa in loo qaabeeyaa si sawirku uga weynaado shaashadda si aaladdu u muujin karto aag badan markii la guurayo, tani walwal kuguma abuuri karto maxaa yeelay si otomaatig ah ayaa loo sameyn doonaa markaad doorato, dhanka kale waa inaad ogow inay isticmaasho batteri badan adoo si joogto ah u isticmaalaya qalabka loo yaqaan 'gyroscope' iyo 'accelerometer' si loo go'aamiyo jihada ay u socoto iyo GPU-da si loo farsameeyo natiijadaas 3D-ga ah
Markaan dooranay qaabka ugu habboon dhadhankeenna iyo baahiyaheenna, waa inaan riixnaa badhanka "Soo xir" oo dooro (shaashadda saddexaad ee sawirka khadadkaas) shaashadda loo sii jeedin doono, ilaa qufulka (halka aan u siibanayno inaan ku furno), guriga (halka ay barnaamijyadeennu joogaan) ama labadaba.
Waraaqda (wallpaper) waxay u muuqan kartaa arrin aan muhiim ahayn, si kastaba ha ahaatee tani maahan kiiska, xulashada aan sameynay waxay ka muuqataa muuqaalka qalabkeena iyo waxqabadkiisa.
Haddii aad tixgeliso in iPhone-gaagu yahay a isku dhafka u dhexeeya xarrago iyo teknolojiyad oo aad ixtiraamto shaqadii Jonathan Ive uu qabtay markii la naqshadeynayay, ku xulo asalka hadba sida aad u kala jeceshahay laakiin taasi waxay raacaysaa tilmaamaha qaab dhismeedka ugu yar (kuwa yar ee ku raran faahfaahinta ayaa ka fiican) taasna waxay ixtiraamaysaa xallinta shaashaddaada iPhone, oo adiga kuu inaad yeelato tilmaan ahaan markaad raadineyso taada, waa kuwan soo socda si waafaqsan tusaalaha (vertical x horizontal):
iPhone 4/4s = 960 x 640 (isha)
iPhone 5/5c/5s = 1.136 x 640 (isha)
Dhinaca kale sidoo kale waa inaad tixgeli waxqabadka qalabka, waxaa jira laba ikhtiyaar oo si taban u saamayn kara iyadoo kuxiran nooca iPhone-ka ee aad haysato, waana asal firfircoon iyo qaab aragtiyeed, talooyinkeyga oo kuxiran moodeelka ayaa ah:
iPhone 4 / 4s: Waraaqo go'an iyo qaab taag ah, awgood oo xoogaa duugoobay iyo waxqabadka aaladahaan oo leh mid ka mid ah xulashooyinkan 2 ee firfircoon ayaa saameyn xun ku yeelan kara dheecaanka nidaamka iyo nolosha batteriga.
iPhone 5 / 5c: Waraaqo go'an, shaashadda qufulka waxaan ku dhejin karnaa asalka qaabka aragtida si aan u siinno dareenkaas 3D markii la furayay ama la hubiyey waqtiga iyada oo aan si daran u saameynaynin dheecaanka ama batteriga.
iPhone 5s / 6: Shaashadda qufulka waxaan ku dooran karnaa sawir-qaadeyaal go'an ama dhaqdhaqaaq leh, qaab muuqaal ama muuqaal ah, doorashadeenna, inkasta oo aan tan kugula talinayo in aynaan saarin asalka firfircoon shaashadda guriga, tani waxay saameyn ku yeelan doontaa nolosha batteriga, GPU Qalabka ayaa si fudud ula jaanqaadi kara ikhtiyaar kasta, in kasta oo ay taasi jirto nolosha batteriga ayaa horayba caddaalad ugu filan si ay uga dhigto inay ku shaqeyso animations-ka shaashadda guriga, waa wax aad sameyn karto haddii aad jeceshahay laakiin waxay yareyn doontaa muddada batteriga ee iPhone-kaaga.
iPhone 6 Plus: Asalka firfircoon ama go'an, qaab ahaan ama muuqaal ahaan, shaashadda guriga, shaashadda qufulka ama labadaba. Wax la mid ah ayaa ka dhaca iPhone 6 Plus sida iPhone 6 iyo 5s, GPU waxay la qabsan karaan animations-ka waqtiga dhabta ah ee la tudhi karo, sidoo kale waxaan leenahay batari aad u sareeya oo noo ogolaanaya inaan ku isticmaalno asalkan xorriyad buuxda.
Waxaan rajeynayaa in wax walba ay kuugu caddaadeen casharradan, iyadoo taasi ay jirto, haddii aad leedahay wixii su'aalo ama walaac ahNoo soo sheeg faallooyinka, kooxdeena tafatirayaasha ayaa ku farxi doona inay ku caawiyaan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Sida loo beddelo gidaarka iPhone-ka, iPad-ka ama iPod Touch oo leh iOS 9
Ma garanayo haddii ay aniga uun igu dhacayso. Markii aan gidaarka ka dhajiyo darbigeyga ayuu dhigay iyo wax walba. Markaan baxayana waxaan arkaa gidaaradayda sawirka oo ka madow ka hooseeya.
Ku jawaab Augusto
Waxaa jiray waxyaabo badan oo aanan aqoon, 7 bilood oo aan watay iphone 6-keyga oo aanan ogeyn waxaas oo dhan .. (beddel lacagaha haddii ..), maxay yihiin waxyaabaha qofku baran karo marka uu maadada sii galo!
Maqaal aad u wanaagsan Juan !!
PS: hadda kuwa neceb iPhone-ka hadda jira waxay u soo baxayaan inay ku dhaleeceeyaan inay tahay qodob qashin ah oo aadan haysan wax kale oo aad dhigatid ...
PS 2: tani waxay u shaqeysaa macruufka cusub!
Markale salaan kadib iyo maqaal wacan markale 😛
Aad baad u mahadsantahay Rafael, faalooyinka sidaada oo kale ah waxay mudan yihiin dadaalka iyo u hurida sameynta maqaallada sidan oo kale ah, waxaan filayay nacayb badan inkasta oo xilligan aysan waxba jirin, mar labaad waad ku mahadsan tahay, iyo wixii aanad aqoon u lahayn, Weligaa seexo adoon baran wax cusub!
Taasina waa tan aan halkaan u joogno, inaan ku siino dhammaan macluumaadka aan kari karno 😀 Waad ogtahay, wixii su'aalo ah, soo-jeedinno ah, cabashooyinka ah iyo kuwa kale, ha ka waaban inaad faallo ka bixiso ^^
Salaan qiimo leh akhristaha qaaliga ahow
Adiga Juan, inaad u keento maqaalo aad u xiiso badan ..
Maalin kasta waxaad baraneysaa wax cusub, xitaa haddii ay tahay dibi dhac laakiin waa wax aadan aqoon oo hadda waad ogtahay!
Waxaan rabay inaan ogaado inaad igula talineysid inaan asal caadi ah ka soo saaro Apple ama sawirka filimka tusaale ahaan sawirkeyga
Subax wanaagsan, waxaan hayaa iPhone 6, dhibna waan qabaa, ma siineyso ikhtiyaarka ah "istaahil iyo aragti", waan ku faraxsanahay haddii aad xal i siin kartid
Ku jawaab Giancarlo
Daniel Cayo dijo
Fiiri inay tahay inaad tagto goobaha - guud - marin u hel - yareynta dhaqdhaqaaqa halkaas waa inaad uga tagtaa inuu dansan yahay waana intaas
Jawaab Daniel Cayo
Kahor intaadan badalin sawirka menu-ka, hada kaliya waxay i siineysaa ikhtiyaarka aan ku badali karo sawirka shaashadda qufulka. Xal kasta? Mahadsanid ☺️
Oo sidee baan ugu socdaa soo celinta asalka asalka? Mahadsanid
Ku jawaab Chiara
Qaali, waxaan bedelay gidaarkayga darbiga ah, laakiin waxaan rabaa inaan dib u dhigo asalka asalka ah mana heli karo. : / sida aan sameeyo?
Waxaan rajeynayaa inay i caawin doonaan. salaan
Ku jawaab RenzoYf
Vianey Ledezma Gzz dijo
Caawinaad, INTA AANAN KA HELIN XULASHADA WAALIDKA, HADA WELI Iima muuqdo
Maxaan sameyn karaa Waxaan rajeynayaa inay i caawiyaan
WAAN LEEYAHAY IPAD
Ku jawaab Vianey Ledezma Gzz
Sababtoo ah ma beddeli karo shaashadayda shaashadda (labadaba) waxay u muuqataa in mar horeba la beddelay oo aan waxba ahayn. Kaliya waxaan dhigi karaa sawiro ama animations ka yimaada iphone.help
Jawaab Daniel sanchez
Multify waa la cusbooneysiiyay si buuxda ula jaan qaada macruufka 8.4
Apple waxay soo saartay Xayaysiis cusub oo loogu talagalay "Haddii uusan ahayn iPhone, Maaha iPhone" Ololaha